Alshabaab Weerar kula Wareegay Degaanka Qalimoow
HomeWararka MaantaAlshabaab Weerar kula Wareegay Degaanka Qalimoow
January 11, 2022 Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Qalimow oo kuyaala inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad ee Jowhar, waxaana deegaankaasi ka dhacay dagaal dhax maray Al Shabaab iyo ciidanka milatariga.
War kasoo baxay Al Shabaab ayey ku sheegeen in ay si buuxda ula wareegeen deegaanka Qalimow ayna halkaasi ka eryadeen ciidanka milatariga Soomaaliya oo halkaasi ku lahaa saldhig ciidan .
Al Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay ku qaadeen deegaanka Qalimow ay ku dileen ilaa sadex askari sidoo kale ku qabsadeen hub iyo saanad kale oo milatari ay lahaayeen ciidanka milatariga.
Taliska ciidanka milatariga Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle ayaan wali ka hadlin weerarkan Al Shabaab ku qaadeen deegaanka Qalimow iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Jidka u dhaxeeya magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa noqday mid ka caagan masuuliyiinta iyo ciidamada , waxaana jidkaasi looga cabsadaa Al Shabaab oo weeraro iyo qaraxyo la beegsada gaadiidka isticmaala
Madaxweynaha Maraykanka Oo Wiil Soomaali ah u magacaabay Darajadii Ugu Sareysay ee Qof Soomaali ah Maraykan ka Qabto
Beesha caalamka oo Warsaxafadeed Ka soo saartay Shirkii Golaha Wadatashi Qaran